Mercedes-Benz V250 2017 (#722632) for sale in Mayangone | CarsDB
Mercedes-Benz V250 2017
Lot Number: #722632
1.4.2020 ဒေါ်လာပေါက်ဈေးဖြင့် ကားတန်ဖိုးတွက်ချက်ထားပါသည်။
လူများများတင်ဆောင်နိုင်သည့် MPV အမျိုးစားများဟာ လိုအပ်ချက်အရ ပုံမှန်အရောင်းဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိပြီ ထိုအမျိုးစားများစွာထဲမှ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရွေးချယ်လိုတယ်ဆိုလျင်တော့ Mercedes-Benz V 250 (MPV) တစ်စီးရောင်းဖို့ရှိပါတယ် ၊ ပါဝင်တဲ့ featured များအနေဖြင့် -
-STEERING WHEEL ADJUSTABLE IN INCLINATION & HEIGHT
-ROOF RAILING ANODIZED
-LOWER CONTROL PANEL SWITCH POSITION
-2-WAY SPEAKER AT FRONT AND REAR
-ELECTRONIC KEY IN CHROME LOOK
-CENTER CONSOLE WITH ROLLER BLIND
-ILLUMINATED MIRRORS FOR SUN VISORS
-SEMI-AUTOM. REGULATED A/C, TEMPMATIC IN REAR တို့အပြင် အခြားနည်းပညာမြင့် စနစ်များစွာပါဝင်သည့် ကားကို လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက ကားကြည့်ပြီး ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမလား ချေးငွေဖြင့်အရစ်ကျဝယ်ယူမလား အသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
In order to avoid being mistaken for scammers, please mention to Aung Aung Oo that you are enquiring about Mercedes-Benz V250 2017 posted on CarsDB when you are calling.
Last Edited2days